Lamasinina avo | RayHaber | Railway | Highway | telegrama fiara
HomeRailwayIntercity Railway SystemsFast train
Nitsidika ny toerana fitaterana haingam-pandeha ambony haingam-pandeha Sivas Ankara ny governora Ayhan
Ilay fitsidihana Ayhan dia nitsidika ny gara Sivas Ankara High Speed ​​Train; Governemanta Sivas Salih Ayhan sy ny solontenan'ny andrim-panjakana mifandraika amin'izany mba handinihana ireo hetsika mitohy sy nomanina ao Sivas ary hanomezana ny serivisy ho an'ny daholobe ho tombontsoan'ny olom-pirenena. [More ...]
Construction mitohy Projects Miavaka Speed ​​Railway-dalana, any Torkia. Mitohy hatrany ny asa fanamboarana lalamby fanamboarana lalamby. Antalya-Eskişehir High Line Line Antalya dia iray amin'ireo tanàna manan-danja indrindra ao Tiorkia raha ny resaka renivohitra momba ny fizahantany sy ny fambolena. [More ...]
01 ao Adana
Torkia ny hafainganam-pandeha sy ny mahazatra Railway fanorenana; Ho fanampin'ny tetik'asa fanamboarana lalamby haingam-pandeha, dia mitohy hatrany ny fanamboarana lalamby haingana sy mahazatra. Fanamboarana lalamby haingam-pandeha 1.480 km sy lalamby mahazatra 646 km [More ...]
Fanandramana fitsarana XHUMX ao Ankara YHT hanomboka ny volana Janoary; 13 any Ankara Desambra 13 Ny fitsarana ny 2018 voampanga, izay niafara tamin'ny fahafatesan'ny olona 9 tao 10, dia manomboka amin'ny Janoary 13. 2020 Tamin'ny Desambra 13 nanao sidina Ankara-Konya [More ...]
Ny halaviran-toerana dia hohafohezin'ny fiaran-dalamby ho an'ny haingam-pandeha ambony; Ny Programme an'ny 2020 isan-taona dia misy fampiasam-bola amin'ny lalamby, ary natao koa ny fandalinana ny High Speed ​​Train (YHT). Minisiteran'ny fitaterana, hafainganana avo vaovao amin'ny 2020 [More ...]
Discount '24 Novambra' amin'ny tapakila fiaran-dalamby sy entana ho an'ny mpampianatra; M. Cahit Turhan, Minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa, 24 Novambra 24-30 avy amin'i TCDD Taşımacılık A.Ş. [More ...]
Tiorkia High Speed ​​gara; Taorian'ny fampiharana ny tetikasa High Speed ​​Railway any Ankara-Istanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-Bursa ary Ankara-Izmir, dia ny fananganana YHT Station Complexes, izay manan-danja amin'ny fanamboarana lalamby. [More ...]
Tiorkia High Speed ​​sy haingam-pandeha Railway-dalana, sy ny sarintany; Amin'ny fananganana lalamby haingam-pandeha, Istanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir sy ankavanan'i Ankara-Konya dia voatondro ho toy ny tambajotra fototra. 15 nikasa hampifandray ny tanànantsika lehibe miaraka amin'ny lalamby haingam-pandeha [More ...]
Misy lamina hafainganam-pandeha hafa eo anelanelan'ny Bursa sy 10 Project
Misy lamasinina hafainganam-pandeha anelanelan'ny tetikasa 10 haorina ao Bursa; Söze "" Manizingizina ianao amin'ny fivoarana amin'ny lamasinina hafainganam-pandeha ambony, ary manaraka akaiky izahay. Avelao aho hanome anao ny vaovao farany indrindra Asabotsy Cumartesi Governemanta sy mpitarika amin'ny oniversite Bahçeşehir any Merinos [More ...]
Fanombohana sidina fiaramanidina avo lenta
Tonga ny Express Intercity High Speed; Ny minisiteran'ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa dia manomana ny vaomieran'ny haingam-pandeha ambony hainganana (YHT) vaovao amin'ny 2020, ary hametraka serivisy serasera amin'ny làlana YHT hanatsarana ny fahombiazana. Araka ny vaovao nataon'i Hürriyet Eray Görgülü; fanompoana [More ...]
Ny tantaran'ny lalamby izay nanomboka niasa tamina varotra varotra tao 1830; Nanambara fomba nandrafitra ny tontolo maoderina izany. Rehefa mijery ny tantaran'ny gara eto amin'izao tontolo izao isika dia azo jerena ny fiantraikany lehibe manoloana ny sehatra rehetra. Ny fivoaran'ny tambajotra manan-danja indrindra any Eropa, ny fiantraikan'ny teknolojia anglisy, any India ary [More ...]
Zava-dehibe ny lalamby for Torkia; Izy no singa voalohany sy manan-danja indrindra amin'ny fomba fitateram-bahoaka, izay mitombo ny lanjany amin'ny resaka rafi-pitaterana. Io no dinam-paritry ny fampifangaroana sy fampandrosoana ara-toekarena. Tena manampy be izy io amin'ny fampandrosoana ara-toekarena, sosialy ary kolontsaina amin'ireo toerana nolalovany. Ara-toekarena, mavesatra [More ...]
Fandaharana fiaran-dalamby ao Ankara Istanbul
Ora amin'ny fiaran-dalamby any Ankara Istanbul: Ireo lamasinina haingam-pandeha ambony làlana dia niditra teo amin'ny fiainantsika, ka mora kokoa sy mahafinaritra kokoa ny fitsangatsanganana. Ny fanavaozana rehetra sy ny fampandrosoana teknolojia amin'ity sehatra ity TCDD [More ...]
Lalana sy sarintany haingam-pandeha ambony Trakya
Lalana sy haingam-pandeha ambony lalana misy lalana: Ny sidina Edirne, Tekirdag sy Kirklareli dia hifandray amin'ny tetikasan'ny Istanbul 'High Speed ​​Train'. Istanbul Halkalı gaga ao amin'ny biraon'ny Edirne Kapıkule dia ho vita ao amin'ny 229 kilometatra haingam-pandeha ambony haingam-pandeha, dia nampandrenesina ny mponina any an-toerana, ny hevitra [More ...]
Hypersensitive momba ny Bussa High Speed ​​Train; Location ... Grand Antenimieram-pirenena ny fivoriana Commission Kit Torkia. Ny tale jeneralin'ny TCDD Kamuran Yazıcı dia ao amin'ny efitrano misy azy miaraka amin'ny mpitantana foiben'ny mpanampy azy amin'ny fivoriana izay hahitana ny kaonty TCDD. Eto K Ity fihaonana ity ho mpikambana ao amin'ny Vaomiera AK Party Bursa lefitra Dr. [More ...]
Sinoa Mandeha ny fiara fitaterana haingam-pandeha haingana an'ny Sinoa; Noho ny haitao ara-batana fiaran-dalamby haingam-pandeha izay manafainganana amin'ny km 350 km, novokarin'i Sina tamin'ny alàlan'ny fandaniany manokana, ny fiasa toy ny mari-pana, ny hazavana sy ny lokon'ny varavarankely dia soloina ho azy. [More ...]
Ny vidin'ny tapakila hafainganam-pandeha ambony indrindra 2019 amin'izao fotoana izao sy ny vanim-potoana YHT: Ny lalamby haingam-pandeha izay manamora ny fiainantsika amin'ny fifamoivoizana an-dàlana dia mitohy mampifandray ireo tanàna sy mpandeha ary kolontsaina samihafa. Samy hafa ny fizahan-tany sy [More ...]
Ankara avo haingam-pandeha amin'ny fiaran-dalamby voafehy voaray; Fiampangana ny fahafatesan'ny olona 9 sy ny lozam-pifamoivoizana izay naratra 107 vokatry ny fifandonan'ny fiaran-dalamby (YHT) sy ny fiaran-dalamby ao Ankara. [More ...]
Hanefa ny Machinist ny TCDD YHT - ny TCDD dia hanao 262 personnel Assignment: Nosokafan'ny mpiasan'ny TCDD ary efa nambara tamin'ny 5.Nov.2019 ny mpiasan'ny TCDD. Tamin'ny fanapahan-kevitra navoaka tao amin'ny Gazety ofisialy, 262, izay banga ao anatin'ny Rail Rail State. [More ...]
Fihetsiketsehana haingam-pandeha any Bursa eto Ankara! 'Mendrika Bursa'
Fihetsiketsehana haingam-pandeha any Bursa eto Ankara! 'Mendrika Bursa'; Nanohana ny fihaonana izay nokarakarain'ny Fikambanana Bursa Fan Club any Ankara ihany koa ireo depiote Bursa. Ny sekretera lefitry ny sekretera jeneralin'ny AK nandritra ny fihaonana natao tao amin'ny hotely CP Ankara [More ...]